musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » COVID-19 Delta Variant inofamba ichitenderera pasirese
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • South Korea Kuputsa Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kutya kwe COVID-19 Misiyano
Enda kunzvimbo uko majekiseni asina kukwirira zvakanyanya, uye ungangodaro uri kutarisa panzvimbo iyo COVID-19 Delta Variant iri kurera musoro wayo wakashata uye ichikonzera kuwedzera kwezviitiko zvecoronavirus zvakare.
Dambudziko repakarepo neiyo Delta Variant ndeyekuti inopararira zvakanyanya.
Parizvino, Musiyano urikufamba neAsia svondo rino.
MuAustralia neSouth Korea, Zvirwere zvakasiyana zvirikurova manhamba akanyorwa dzimwe nyika kusimbisa zvibvumirano zvakare vachikurudzira vagari kuti vabaiwe jekiseni.
Iyo COVID-19 Delta Variant yakatanga kuwanikwa muIndia muna Zvita 2020. Mumwedzi mitanhatu yapfuura, yakapararira kutenderera nyika zana. Munguva pfupi yapfuura, iyo World Health Organisation (WHO) yakayambira kuti iyo Musiyano inogona kukurumidza kuve ndiyo inonyanya kuita iyo coronavirus.
Mudunhu reNew South Wales, Australia, kuwedzera kukuru kwezuva nezuva mumatambudziko matsva kusvika zvino gore rino kwataurwa. Kwazvino kubuda kwakapfuura mazana maviri neakawanda ezviitiko izvi zvinokonzerwa ne Delta Musiyano. Sydney, musha wechishanu wevagari vemamiriyoni makumi maviri nemashanu emunyika, iri pakati nepakati pekuvhara kwemavhiki maviri kuti kuve nekuputika, izvo zvakavhundutsa zviremera pakati pehusimbe hwekudzivirira nhomba munyika.
Australia, sedzimwe nyika dzinoverengeka muAsia, yatambura kunwisa vanhu seyakabudirira mukuva nedenda iri kwakatungamira mukuzeza kwemishonga, uye vagadziri vakanonoka kutumira madhiragi. Australia yakabaira zvizere chete zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvevagari vayo, nepo Japan yakabaya 6 muzana.
Nemitambo yeOlimpiki yezhizha mwedzi uno muJapan, iyo Delta Variant iri kuvharidzira mitambo. Sekureva kwemishumo, chinenge chikamu chimwe muzvitatu chezviitiko zvese kumabvazuva kweJapan ndezveKusiyana uye zvinogona kusvika makumi mashanu kubva muzana nepakati pemwedzi uno. Tokyo nematunhu matatu akavakidzana vari kuzviwana mune imwe nenjodzi nekuwedzera kwechangobva kuitika muzvirwere zvecoronavirus. Gavhuna weTokyo Yuriko Koike ati pane mukana wekurambidzwa kwevatariri vanopinda maOlympic Games akarongerwa kutanga muna Chikunguru 50 kana huwandu hwemhosva dzikaramba dzichikwira.
Mune mamwe matunhu eAsia
In Tairendi, kunyanya muPhuket, nzvimbo iyi inozivikanwa yekushanya yakavhurwa kune vakazara-vachengeti vashanyi. Parizvino iyo Alpha Variant iyo yakatanga kutaurwa muUK ndiyo ichiri kutonga kwakanyanya muThailand. Zvisinei, zviremera zveThai zvakati zvinotarisira kuti Delta Variant ichatora chigaro semhosva huru yakataurwa mumwedzi mishoma inotevera. Thailand yakaona izuva rechitatu rinoteedzana zuva rekufa rekodhi nekuda kwe COVID-19. Zvakadaro, Thailandon Chishanu yakashuma rechitatu rakatwasuka zuva rekodhi coronavirus kufa. Musiyano weAlfa, wakatanga kuwanikwa muUnited Kingdom, uchiri iwo musiyano mukuru munyika, kunyange hazvo zviremera zvakati zvinotarisira musiyano weDelta kutonga mumwedzi mishoma inotevera.
In Chammhembe Koria, kesi dzekoronavirus dzakapetwa mazana masere nezuro, dzakakwirira kwazvo mumwedzi ingangosvika mitanhatu. Ivhareji huwandu hwehutachiona hutsva munyika hwakwira kwemazuva gumi apfuura, uye zviremera muSeoul zvakanonoka kudzikamisa matanho ekupararira munharaunda. Nyika chete ine nhomba yekudzivirira kusvika zvino pasi pegumi muzana.
In Indonezhiya, matanho ekukurumidzira atanga nhasi nekuda kwespike mumakesi eCOVID-19 nezviyero zvinotarisirwa kugara munzvimbo zvirinani kusvika Chikunguru 20.
In India, hurumende iri kutarisa kuwanda vaccinations mukupindura kuwedzera kukuru kwezviitiko uye kufa muna Chivabvu naJune.
Kusimukira mune nyowani zviitiko muEurope kwakaisa kushanya kwezhizha pasi pegore rakasviba kunyangwe kuvhurwa kweEuropean Union COVID-19 gwaro rekufambisa iro raitarisirwa kuti richakurudzira zvimwe zviitiko zvekufamba. Britain iri kuonawo dzimwe nyaya dzeDelta Variant, asi kunyangwe izvi zvikaitika, nyika iri kuronga kumisidzana nehupenyu kubva muna Chikunguru 19. Germany yakataura nezuro kuti inotarisira kuti misiyano inoverengera kusvika makumi masere muzana ematare matsva mwedzi uno. MuPortugal, nguva dzekusvika panguva dzehusiku dzakatangwa.
United States yaonawo kukwira kwehutachiona hweDelta Variant munzvimbo dzenyika umo nhomba dzekudzivirira dzinoramba dzakaderera. Mutungamiri weUnited States Biden akati nezuro hurumende ichave ichitumira rubatsiro rwakakosha kunzvimbo dzinopisa dzeutachiona.